Ngabe udinga igqwetha? Ukuxhumana Law & More
Ukuqoqa Izikweletu Nokunamathiselwa Kwezimpahla eNetherlands
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ama-30% emabhange eNetherlands abangelwa ama-invoice angakhokhelwa. Ingabe inkampani yakho inekhasimende elingakakhokhi? Noma ungumuntu ozimele futhi unaye okweletayo okusakweleta imali? Bese uthinta i- Law & More abameli bokuqoqa izikweletu.
QOQA IZIMALI ZOKUVUNA?
Umthetho wokuqoqa izikweletu
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ama-30% emabhange eNetherlands abangelwa ama-invoice angakhokhelwa. Ingabe inkampani yakho inekhasimende elingakakhokhi? Noma ungumuntu ozimele futhi unaye okweletayo okusakweleta imali? Bese uthinta i- Law & More abameli bokuqoqa izikweletu. Siyaqonda ukuthi ama-invoice angakhokhiwe ayacasula kakhulu futhi awathandeki, yingakho sikusiza kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kwenqubo yokuqoqa. Abameli bethu bokuqoqa izikweletu bangahamba ngenqubo yokuqoqwa kwejaji eleqile kanye nenqubo yokuqoqwa kokwahlulela. Law & More ujwayelene nomthetho wokunamathiselwa futhi angakusiza uma kwenzeka uqothuka. Ekugcineni, akwenzi mehluko kithi ukuthi okweletayo uhlala eNetherlands noma usungulwe phesheya. Ngenxa yemvelaphi yethu yaphesheya, silungele izimangalo eziyinkimbinkimbi kakhulu, eziphikisanayo noma ezinkulu.
> Indlela ye-ejensi yokuqoqa isikweletu
> Izigaba zenqubo yokuqoqa
Uma kukhulunywa ngokuqoqwa kwezikweletu, kungenzeka ukuthi ucabanga nge-ejensi yokuqoqa izikweletu noma umsizi wesikhonzi senkantolo kunommeli wokuqoqa izikweletu. Lokhu kungenxa yokuthi wonke amaqembu amathathu akwazi ukuqoqa izikweletu ezingekho. Kodwa-ke, kunezinyathelo ezithile ezibalulekile enqubweni yokuqoqwa okungenziwa ngummeli wokuqoqa izikweletu:
• Ummeli wokuqoqwa kwesikweletu kuphela ogunyazwe ukuqhuba inqubo yezomthetho ngamacala angenhla kwe- € 25.000,00.
• Kugunyazwe ukuthatha umhlaba kanye nemali etholwayo
• Ummeli wokuqoqwa kwesikweletu kuphela ogunyazwe ukufaka isicelo sokuqothuka.
• Ummeli wokuqoqa izikweletu kuphela ogunyazwe ukuphatha amacala wokuqokelelwa kwezikweletu aphesheya.
• Ukufanelekela ukuxazulula izingxabano zomthetho. Ummeli wokuqoqa izikweletu kufanelekile ukuhlinzeka ngezixazululo ezenziwe ngezifiso nokuhlola nokuphindisela ukuvikela.
Kwenzeka kaningi ukuthi ngesikhathi senqubo yokuqoqa, kusadingeka ukuthi ushintshe usuka enhlanganweni yokuqoqa noma umsizi wesikhonzi senkantolo ube ngummeli wokuqoqa. Esimweni esinjalo kulula futhi kuhleleke ukwedlula ngesikhathi esisodwa futhi lapho waziwa khona, futhi usuvele wakhelwe ifayela.
Izinyathelo ezine zeseqo ngakwesokudla
Ngabe ubhekene nekhasimende elingakhokhi? Ukuxhumana Law & More
Sicela osikweletayo akhokhe ngesaziso sokuzenzakalelayo
Sihlela izingxoxo ukuze senze okweletayo akhokhe noma enze amalungiselelo okukhokha
Siqala inqubo esemthethweni futhi sibambe impahla uma kudingeka
ngesikhathi esivunyelwe. ”
Indlela ye-ejensi yokuqoqa isikweletu
Ngenqubo ngayinye yokuqoqa, izinyathelo ezimbalwa kufanele zithathwe. Isinyathelo sokuqala ukwazisa okweletwayo ukuthi akasifezi isibopho sakhe sokukhokha. Lokhu kungenxa yokuthi kufanele umnikeze ithuba lokukhokha ngaphakathi kwesikhathi esifanele ngaphandle kwezindleko ezinye. Kufanele uthumele okweletayo isikhumbuzo esibhaliwe ngalo mphumela. Lesi sikhumbuzo sibizwa ngokuthi isaziso sokuzenzakalelayo. Isikhathi sezinsuku eziyishumi nane ngokuvamile sithathwa njengesikhathi esifanele lapho okweletwayo ecelwe ukuba akhokhele isicelo. Kunjalo, Law & Moreabameli bangakwazi ukukunikeza inothi yokuzenzakalelayo.
Uma kungekho saziso sokuzenzakalelayo esithunyelwe, ijaji lizokwenqaba noma yisiphi isimangalo somonakalo. Kodwa-ke, kunezimo lapho kungadingeki ukuthumela isaziso sokuzenzakalelayo, isb ukulandela isivumelwano akunakwenzeka ngokuphelele. Noma kunjalo, kungakuhle ukuthi ngaso sonke isikhathi uthumele isaziso sokuzenzakalelayo njengendlela yokuqapha. Uma isicelo sokukhokha singalandelwa, singakwazi ukuqala inqubo yokuqoqa.
Izigaba zenqubo yokuqoqa
Kunezigaba ezimbili ezinokwenzeka enqubweni yokuqoqa: isigaba sokuthula, esaziwa nangokuthi isigaba esengeziwe sokwahlulela, kanye nesigaba sokwahlulela ..
Uma ubudlelwano phakathi kwamaqembu buhle, kungakuhle ukuthi uqale udlule esigabeni esinokuthula. Kulesi sigaba, sizama ukukhuthaza okweletayo ukuthi akhokhe ngezikhumbuzo ezibhaliwe nokuxhumana ngocingo. Kungenzeka ukuthi lezi zingxoxo nezingxoxo ziholele elungiselelweni lokukhokha. Sincoma ukuthi ilungiselelo lokukhokha libekwe phansi. Abameli bethu bokuqoqa izikweletu bangakunakekela lokhu. Inzuzo yesigaba esisebenzisekayo ukuthi ubudlelwano phakathi kwezinhlaka buvame ukungonakaliswa nokuthi akukho zindleko zokuqulwa kwezomthetho ezikweletwayo.
Uma isigaba esijabulisayo singakwazi ukuqedwa ngokukhokha kwesikweletu noma ngohlelo lokukhokha, izinqubo zomthetho zingasungulwa. Kungenzeka futhi ukweqa isigaba esijabulisayo futhi uqale izinyathelo zomthetho ngokushesha. Esigabeni sezomthetho, sifuna ukukhokhwa kwemali esele futhi izindleko zokuqoqa phambi kwenkantolo. Ngaphambi kokuqulwa kwamacala ngokusemthethweni, kungenzeka ukuthi kuthathwe impahla yomkweletu. Lokhu kubizwa ngokuthi ukubanjwa kwenkani. Ukunamathiselwa kokwahlulela kuhloswe ukuthi kuqinisekiswe ukuthi okweletwayo uyehluleka ukuthutha impahla ngaphambi kokuba inkantolo ikhiphe isinqumo, ukuze ukwazi ukubuyisa izindleko zakho kulowo omkweletayo. Uma umahluleli enikeza isimangalo sakho, okunamathiselwe ngokuphepha kuzoguqulwa kube okunamathiselwe okusebenzayo. Lokhu kusho ukuthi izimpahla ezinamathiselwe zingathengiswa umsizi wesikhonzi senkantolo emphakathini uma okweletayo engakakhokhi. Imali engenayo yalezi zimpahla izosetshenziselwa ukukhokha isimangalo sakho. Law & MoreAbameli bokuqoqa izikweletu banolwazi emkhakheni wemithetho yokunamathiselwa futhi bayakujabulela ukukusiza ngesikhathi senqubo yezomthetho.
Law & More futhi ihlinzeka ukwesekwa ukuvikela izingozi ezihlobene nokukhokha nokukhokha sekwephuzile Isibonelo, sicebisa amaklayenti ukuthi afake imigomo nemibandela yokukhokha ejwayelekile engavikela ukungaqondakali uma kwenzeka kukhokhwe ngemuva kwesikhathi. Ungathanda imininingwane eminingi ngalokhu? Sicela uxhumane nabameli bokuqoqa isikweletu Law & More.